Nhau - Strategic ongororo yeFTTH tekinoroji
Strategic ongororo yeFTTH tekinoroji
Zvinoenderana nedhata rakaringana, chikamu chevashandisi vebhendi repamusorosoro reFTTH / FTTP / FTTB chinosvika 59% muna 2025. Dhata rakapihwa nekambani yekutsvagisa misika yePoint Topic inoratidza kuti chiitiko ichi chebudiriro chichava 11% yakakwira kupfuura danho razvino.
Point Topic inofungidzira kuti kuchave nevashandisi vebhanti repamhepo vanogadzikana vanosvika 1,2 pasi rese panopera 2025. Mumakore maviri ekutanga, huwandu hwese hwevashandisi vepasi rese vepamhepo vakapfuura mucherechedzo bhiriyoni.
Vanenge 89% yevashandisi ava vari mumisika yepamusoro 30 pasirese. Mumisika iyi, FTTH uye nehunyanzvi hwetekinoroji zvinonyanya kubata mugove wemusika kubva kuXDSL, uye iyo xDSL chikamu chemusika chinodonha kubva pa19% kusvika 9% panguva yekufungidzira. Kunyangwe huwandu hwese hwevashandisi ve fiber kuchivako (FTTC) uye VDSL uye DOCSIS-based hybrid fiber / coaxial cable (HFC) inofanirwa kukwira panguva yekufungidzira, chikamu chemusika chinoramba chakadzikama. Pakati pavo, FTTC ichaverengera ingangoita 12% yehuwandu hwehukama, uye HFC ichaverenga 19%.
Kubuda kwe5G kunofanirwa kudzvinyirira yakamisikidzwa broadband kunyorera panguva yekufungidzira. Pamberi pe5G isati yatumirwa, hazvisati zvichikwanisika kufungidzira kuti musika uchakanganiswa zvakadii.
Ichi chinyorwa chichafananidza Passive Optical Network (PON) yekuwana tekinoroji uye Active Optical Network (AON) yekuwana tekinoroji inoenderana nemamiriro enharaunda dzekugara munyika yangu, uye ongorora zvakanakira nekuipira kwekushandisa kwayo munzvimbo dzinogara vanhu muChina. , Nekujekesa akati wandei matambudziko mukushandisa kweFTTH tekinoroji yekuwana mumatunhu ekugara munyika yangu, nhaurirano pfupi nezvenzira dzenyika yangu dzakakodzera dzekuvandudza tekinoroji yekushandisa yeFTTH.
1. Hunhu hwenyika yangu FTTH inotarisirwa musika
Parizvino, musika wakanangwa weFTTH muChina hapana mubvunzo vagari venzvimbo dzekugara mumaguta makuru, epakati nepadiki. Misha yekugara yemaguta kazhinji inogara gadheni -statheni dzekugara nzanga. Maitiro avo akasarudzika ndeaya: kuwanda kwemhuri. Nzvimbo dzega dzega dzegadheni dzekugara dzinowanzove ne500-3000 vagari, uye mamwe ari makumi ezviuru emhuri; nharaunda dzekugara (kusanganisira zvivakwa zvekutengesera) zvinowanzo kuve nemakamuri ekutaurirana emidziyo yekumisikidza yekushandisa yekuwana michina uye nemaoko anotambidza munharaunda yese. Uku kumisikidzwa kunodiwa kune vanoita zveterevhizheni kukwikwidzana uye nekubatanidza masevhisi mazhinji enhare. Iyo daro kubva mukamuri yemakomputa kune mushandisi kazhinji iri pasi pe1km; main telecom operators uye cable cable operators vanowanzoisa madiki epakati kuverenga (kazhinji 4 kusvika ku12 cores) tambo dzinoonekera kumakamuri emakomputa edzimba dzekugara kana zvivakwa zvekutengesa; yekugara yekutaurirana uye kupinda kweCATV munharaunda Cable zviwanikwa ndezve mumwe nemumwe opareta. Humwe hunhu hwekutengesa kwenyika yeFTTH yenyika yangu kuvepo kwezvipingamupinyi zveindasitiri mukupihwa kwemasevhisi: telecom vashandisi havabvumidzwe kuita mabasa eCATV, uye chinzvimbo ichi hachigone kuchinjwa kwenguva yakati rebei mune ramangwana.
2. Sarudzo yeFTTH Access Technology munyika yangu
1) Matambudziko anotarisana nepassive optical network (PON) muFTTH kunyorera munyika yangu
Mufananidzo 1 unoratidza maratidziro dhizaini uye kugoverwa kweakanaka pusa optical network (Passive Optical Network-PON). Zviratidzo zvacho ndezvi: Optical Line terminal (Optical Line Terminal-OLT) inoiswa mukamuri repamberi remakomputa yeterevhizheni, uye mapasipiti anopenya anoiswa (Splitter). Pedyo nepazvinogona napo kune optical network unit (Optical Network Unit —— ONU) padivi remushandisi. Iyo nzvimbo iri pakati pe OLT ne ONU yakaenzana neiyo nhambwe iri pakati pekamuri repamberi yemakomputa yeterevhizheni uye mushandisi, iyo yakafanana neyazvino yakasarudzika nhare yekuwana nhanho, iyo inowanzo kuve makiromita akati wandei, uye iyo Splitter inowanzova makumi emamita kusvika mazana emamita kure neONU. Ichi chimiro uye marongero ePON anosimbisa zvakanakira PON: iyo rese network kubva pakati yepakati kamuri kamuri kusvika kumushandisi inzvimbo yekungoita; huwandu hwakawanda hwefibre optic tambo zviwanikwa kubva pakati pecomputer kamuri kune mushandisi zvakachengetedzwa; nekuti iri-kune-yakawanda, huwandu hwemidziyo mukamuri repakati remakomputa yakaderedzwa uye Scale, ichideredza huwandu hwetambo mukamuri yepakati yemakomputa.
Iyo yakanaka dhizaini yeiyo passive optical network (PON) munzvimbo yekugara: OLT inoiswa mukamuri repakati remakomputa yemuterevhizheni opareta. Zvinoenderana neshoko rekuti Splitter iri padyo nemushandisi sezvinobvira, iyo Splitter inoiswa mubhokisi rekuparadzira pasi. Zviripachena, kurongeka kwakakodzera uku kunogona kuratidza zvakanakira PON, asi zvichaunza matambudziko anotevera: Chekutanga, yepamusoro-kati nhamba fiber optic tambo inodikanwa kubva mukamuri repakati remakomputa kuenda kunzvimbo yekugara, senge 3000 dzimba dzekugara. , yakaverengerwa pachiyero chebazi cha1: ​​16, Inoda kusvika mazana maviri-epakati fiber tambo inodiwa, asi parizvino ingori 4-12 cores, zvinonetsa kwazvo kuwedzera kuiswa kweiyo optical tambo; chechipiri, vashandisi havagone kusarudza vakasununguka munhu anoshanda, vanogona chete kusarudza sevhisi inopihwa nemumwe muterevhizheni opareta, uye hazvidzivirike kuti mushandi mumwechete anotonga Mamiriro ezvinhu ebhizinesi haagone kukwikwidza kwevashandisi vazhinji, uye zvido zvevashandisi hazvigone zvinobudirira kudzivirirwa. Chechitatu, vapfuuri vekuparadzira vakaiswa mubhokisi rekuparadzira pasi rinozokonzeresa kuti nzvimbo dzekuparadzira dzive dzakapararira kwazvo, zvichikonzera kugoverwa kwakanyanya, kuchengetedza uye manejimendi. Zvinotomboita kunge zvisingaite; chechina, hazvigoneke kugadzirisa mashandisirwo enetiweki michina uye mapindiro ayo ekuwana, nekuti mukati mekuvharwa kwePON imwechete, chiyero chekuwana mushandisi chinonetsa kuwana 100%.
Kurongeka chaiko kwepassive optical network (PON) munzvimbo yekugara: OLT uye Splitter zvese zvakaiswa mukamuri yemakomputa yenzvimbo yekugara. Zvakanakira kurongeka kwechokwadi ndezvekuti: chete tambo dzepasi-pechetambo dzemagetsi dzinodiwa kubva mukamuri repakati remakomputa kuenda kunzvimbo yekugara, uye izvo zviripo zvemagetsi tambo zvinogona kusangana nezvinodiwa; mitsara yekuwana yenzvimbo yese yekugara yakasungwa mukamuri yemakomputa yenzvimbo yekugara, ichibvumira vashandisi kusarudza zvakasununguka vashandisi vefoni. Kune vanoshandisa terevhizheni, network iri nyore kwazvo kupa, kuchengetedza uye kubata; Nekuti michina yekuwana uye mapaneru ari mune imwechete mukamuri kamuri, pasina mubvunzo ichavandudza zvakanyanya kushandiswa kwechiteshi kwemidziyo, uye iyo yekushandisa michina inogona kuwedzerwa zvishoma nezvishoma zvichienderana nekuwedzera kwenhamba yevanoshandisa mukana. . Nekudaro, kurongeka kwechokwadi uku kunewo nekukanganisa kuri pachena: Chekutanga, maratidziro mamiriro ekurasa PON ndiyo mukana wakakura kwazvo wepasiti network, uye yepakati kamuri yemakomputa kune mushandisi network ichiri network inoshanda. chechipiri, haina kuchengetedza fiber optic tambo zviwanikwa nekuda kwePON; , PON michina ine yakakwira mutengo uye yakaoma network chimiro.
Mukupfupisa, PON ine mativi maviri anopesana muFTTH kushandiswa kwenzvimbo dzekugara: Zvinoenderana neyakarongeka manetwork dhizaini uye marongero ePON, inogona kupa kutamba kune kwayo kwayakanakira: iyo rese network kubva pakati pecomputer kamuri kune mushandisi iri passive network, iyo inochengetedza yakawanda yepakati yemakomputa kamuri Kune yemushandisi fiber optic tambo zviwanikwa, huwandu uye chiyero chemidziyo mukatikati yekombuta kamuri chakareruka; zvisinei, zvinounzawo kutadza kusingagamuchirwe: kuwedzera kukuru mukugadzikwa kwefibre optic tambo tambo inodiwa; nzvimbo dzekuparadzira dzakapararira, uye kugoverwa kwenhamba, kugadzirisa uye manejimendi kwakaomarara zvakanyanya; vashandisi havagone kusarudza vakasununguka maOperator havana kukodzera kukwikwidza kune vakawanda-opareta, uye zvido zvevashandisi hazvigone kuvimbiswa zvine mutsindo; iko kushandiswa kwenetiweki michina uye kwayo yekuwana madoko kwakaderera. Kana iyo chaiyo marongero eiyo pasive optical network (PON) munzvimbo yekugara inogamuchirwa, izvo zviripo zvemagetsi tambo zviwanikwa zvinogona kusangana nezvinodiwa. Kamuri yemakomputa yenharaunda yakaenzana wired, izvo zviri nyore kwazvo kupa, kuchengetedza uye kubata manhamba. Vashandisi vanogona kusununguka kusarudza opareta, iyo inonyatso kuvandudza Mashandisiro ekushandisa chiteshi, asi panguva imwechete yakasiya mabhenefiti maviri akakosha ePON seyenzvimbo yekutetepa uye yekuchengetedza fiber optic tambo zviwanikwa. Parizvino, inofanirwawo kutsungirira zvinetswa zveyakakwira PON michina mutengo uye yakaoma network chimiro.
2) Sarudzo yeFTTH yekuwana tekinoroji yenzvimbo dzekugara munyika yangu-Point-to-point (P2P) yekuwana tekinoroji yeAlex Optical Network (AON) munzvimbo dzekugara.
Zviripachena, izvo zvakanakira PON zvinonyangarika munzvimbo dzinogara vanhu vakawanda. Sezvo iyezvino PON tekinoroji isiri yakakura kwazvo uye mutengo wemidziyo unoramba wakakwira, isu tinotenda kuti zvakanyanya sainzi uye zvinogoneka kusarudza tekinoroji yeAON yeFTTH kuwana, nekuti:
RoomsMakamuri emakomputa anowanzo gadzirirwa munharaunda;
-AON's P2P tekinoroji yakakura uye yakaderera-mutengo. Inogona kupa zviri nyore 100M kana 1G bandwidth uye nekuona musono chinongedzo nepo makomputa network;
-Hapana chikonzero chekuwedzera kuiswa kwetambo dzemaziso kubva pakati pechipenga muchina kunzvimbo yekugara;
ImpSimple network dhizaini, yakaderera kuvaka uye kushanda uye kugadzirisa mitengo;
-Centralized wiring mukomputa kamuri yenharaunda, zviri nyore kupa nhamba, kuchengetedza uye kubata;
-Vabvumire vashandisi kusarudza vakasununguka vashandisi, zvinoenderana nemakwikwi evashandisi vazhinji, uye zvido zvevashandisi zvinogona kuchengetedzwa zvinobudirira kuburikidza nemakwikwi;
---- Iyo yekushandisa chiteshi chishandiswa chiyero chakanyanya kwazvo, uye kugona kwacho kunogona kuwedzerwa zvishoma nezvishoma zvichienderana nekuwedzera kwenhamba yevanoshandisa vashandisi.
Iyo yakajairwa AON-yakavakirwa FTTH network mamiriro. Iyo iripo iripasi-yepakati fiber fiber optic tambo inoshandiswa kubva kune yemukati telecom opareta mukombuta kamuri kuenda kunharaunda yekombuta kamuri. Iyo switching system inoiswa mukamuri yemunharaunda makomputa, uye iyo po-po-po-po (P2P) networking modhi inogamuchirwa kubva munharaunda yekamuri kamuri kuenda kune yekushandisa mushandisi. Inouya michina uye zvigamba zvikwangwani zvakaiswa zvakaenzana munharaunda yekamuri kamuri, uye iyo rese network inotora iyo Ethernet protocol ine tekinoroji tekinoroji uye yakaderera mutengo. AON's point-to-point FTTH network parizvino ndiyo tekinoroji yekuwana yeFTTH inowanzo shandiswa muJapan neUnited States. Pakati pevashandisi vemamirioni mashanu eFTTH aripo pasirese, vanopfuura 95% vanoshandisa switching P2P inoshanda. Zvakanakira kunaka ndezvi:
IghHigh bandwidth: nyore kuona yakatsiga maviri-nzira 100M Broadband kuwana;
-Iyo inogona kutsigira Internet Broadband kuwana, CATV kuwana uye runhare kuwana, uye nekuona kusangana kwematanhatu matatu mune yekuwana network;
Tsigira bhizinesi idzva rinotaridzika mune ramangwana: vhidhiyo mafoni, VOD, dhijitari sinema, hofisi iri kure, kuratidzwa pamhepo, dzidzo yeTV, kurapwa kwekure, dura rekuchengetedza uye backup, nezvimwe.
ImpSimple network mamiriro, tekinoroji yakakura uye mutengo wepasi wekuwana;
RoomKamuri remakomputa chete munharaunda inzvimbo inoshanda. Simbisa wiring yekamuri yemakomputa kudzikisa mutengo wekugadzirisa uye kugadzirisa mashandisirwo emachiteshi emidziyo;
-Vabvumire vashandisi kusarudza vakasununguka vashandisi, zvinoenderana nemakwikwi pakati pevashandisi venhare;
-Kunyatso chengetedza iyo fiber optic tambo zviwanikwa kubva pakati pecomputer kamuri kuenda kunharaunda, uye hapana chikonzero chekuwedzera kuiswa kwefiber optic tambo kubva pakati pecomputer kamuri kuenda kunharaunda.
Isu tinotenda kuti zvakanyanya sainzi uye zvinogoneka kusarudza tekinoroji yeAON yeFTTH kuwana, nekuda kwekusava nechokwadi mukuvandudzwa kwePON zviyero uye matekinoroji:
-Iyo yakajairwa ichangobva kuoneka, ine akawanda mavhezheni (EPON & GPON), uye makwikwi emiyero haina chokwadi nekusimudzira mune ramangwana.
DevicesMidziyo inobatsira inoda makore mashanu kusvika mashanu ekumisikidza uye kukura. Zvichava zvakaoma kukwikwidza neazvino Ethernet P2P zvishandiso maererano nemutengo uye mukurumbira mumakore anotevera 3-5 makore.
-PON Optoelectronic zvishandiso zvinodhura: yakakwira-simba, kumhanya-mhanya kuputika kutapurirana uye kugashira; izvozvi zvigadzirwa zvemagetsi zvemagetsi zviri kure nekugona kuzadzisa zvinodiwa zvekugadzira yakaderera-mutengo masisitimu ePON.
-Pari zvino, avhareji yekutengesa mutengo wekunze EPON michina iri 1,000-1,500 US madhora.
3. Teerera kune njodzi dzetekinoroji yeFTTH uye dzivisa nekupofomadza kukumbira rutsigiro rwekuzara-sevhisi kuwana
Vazhinji vashandisi vanoda FTTH kutsigira ese masevhisi, uye panguva imwechete kutsigira Broadband Internet kuwana, terevhizheni terevhizheni (CATV) kuwana uye yechinyakare yakamisikidzwa foni kuwana, ndiko kuti, katatu kutamba mukana, vachitarisira kuzadzikisa FTTH yekuwana tekinoroji mune imwe nhanho. Isu tinotenda kuti zvakanaka kuti tikwanise kutsigira Broadband Internet kuwana, kushomeka terevhizheni (CATV) kuwana uye yakajairwa yakagadziriswa-tambo yekuwana runhare, asi zviripo kune hukuru hukuru hwehunyanzvi.
Parizvino, pakati pevashandisi vemamirioni mashanu eFTTH munyika, zvinopfuura 97% yeFTTH yekuwana netiweki inongopa chete maInternet mabhendi ekuwana masevhisi, nekuti mutengo weFTTH kupa yakasarudzika nhare yakatarwa yakakwira zvakanyanya kupfuura mutengo weiyo huripo wakagadziriswa foni tekinoroji, uye kushandiswa kwefiber fiber kupfuudza yechinyakare yakamisikidzwa Runhare zvakare rune dambudziko rerunhare magetsi. Kunyangwe AON, EPON uye GPON zvese zvinotsigira katatu kutamba mukana. Nekudaro, iyo EPON uye GPON zviyero zvichangobva kuburitswa, uye zvinotora nguva kuti tekinoroji ikure. Makwikwi pakati pe EPON neGPON nekusimudzirwa mune ramangwana kweaya mairi zviyero zvakare haina chokwadi, uye poindi-kune-multipoint pusa network dhizaini haina kukodzera ku China yakakwira density. Nzvimbo dzekugara dzekushandisa. Zvakare, EPON uye GPON zvinoenderana zvishandiso zvinoda makore angangoita mashanu ekumisikidza uye kukura. Mumakore mashanu anotevera, zvichave zvakaoma kukwikwidza neazvino maEthernet P2P zvishandiso maererano nemutengo uye mukurumbira. Parizvino, zvigadzirwa zvemagetsi zveOpto zviri kure nekukwanisa kuzadzisa zvinodhura zvekugadzira. Mutengo PON system zvinodiwa. Izvo zvinogona kuoneka kuti bofu kutsvaga kweFTTH yakazara-sevhizheni kuwana kushandisa EPON kana GPON padanho rino zvinonzwisisika kuunza hombe hunyanzvi hunyanzvi.
Pane yekuwana network, iri tsika isingadzivisike ye optical fiber kutsiva tambo dzakasiyana dzemhangura. Nekudaro, Optical fiber inochinja zvachose tambo dzemhangura husiku hwese. Izvo hazvigone uye hazvifungidzike kune ese masevhisi kuti awanikwe kuburikidza nemaziso fiber. Chero kufambira mberi kwetekinoroji uye kunyorera kunoitika zvishoma nezvishoma, uye FTTH haisi iyo yega. Naizvozvo, mukutanga kuvandudza uye kusimudzira kweFTTH, kugara pamwe kweiyo fiber fiber uye tambo yemhangura hakudzivisike. Iko kugarisana kweiyo Optical fiber uye yemhangura tambo inogona kugonesa vashandisi uye telecom vanoshanda kuti vanyatso kudzivirira njodzi dzehunyanzvi dzeFTTH. Chekutanga pane zvese, AON yekuwana tekinoroji inogona kushandiswa mune yekutanga nhanho kuwana FTTH Broadband kuwana nemutengo wakaderera, nepo CATV uye zvetsika zvakasarudzika nhare zvichiri kushandisa coaxial uye yakamonyaniswa vaviri kuwana. Kune dzimba, dzimba dzeCATV dzinogona kuwanikwa zvakare panguva imwe chete kuburikidza neefiber fiber nemutengo wakaderera. Chechipiri, kune zvipingamupinyi zveindasitiri mukupihwa kwemasevhisi enhare kuChina. Vashandisi veTelecom havabvumidzwe kushandisa masevhisi eCATV. Pane zvinopesana, vanoshanda veCATV havabvumidzwe kushandisa echinyakare nharembozha masevhisi (senge runhare), uye iyi mamiriro achave akareba nguva yakareba mune ramangwana. Iyo nguva haigone kuchinjwa, saka imwechete opareta haigone kupa katatu mitambo yekutamba pane iyo FTTH yekuwana network; Zvakare, sezvo hupenyu hwetambo dzemaziso dzinogona kusvika makore makumi mana, nepo tambo dzemhangura kazhinji dziri makore gumi, kana tambo dzemhangura dzichikonzerwa nehupenyu Kana mhando yekutaurirana ikadzikira, hapana chikonzero chekuisa tambo. Iwe unongoda kukwidziridza iyo fiber optic michina kuti upe masevhisi anopihwa neyekutanga tambo dzemhangura. Muchokwadi, sekureba sekunge tekinoroji yakura uye mutengo uchigamuchirwa, unogona kusimudzira chero nguva. Optical fiber michina, inokodzera nguva kunakirwa zviri nyore uye yakakwira bandwidth inounzwa neiyo nyowani FTTH tekinoroji.
Kupfupisa, iko iko kusarudzwa kweiyo fiber fiber uye yemhangura tambo kugarisana, uchishandisa AON's FiberP2P FTTH kuwana Internet Broadband kuwana, CATV uye zvetsika zvakasarudzika nhare zvichiri kushandisa coaxial uye yakamonyaniswa vaviri kuwana, iyo inogona kunyatso kudzivirira njodzi yeFTTH tekinoroji Panguva imwecheteyo nguva, nakidzwa zviri nyore uye yakakwira bandwidth inounzwa neiyo nyowani FTTH yekuwana tekinoroji nekukurumidza sezvazvinogona. Kana tekinoroji yakura uye mutengo uchigamuchirwa, uye zvipingamupinyi zveindasitiri zvabviswa, iyo fiber optic michina inogona kukwidziridzwa chero nguva kuti ione FTTH yakazara sevhisi yekuwana.
Xfp Transceiver, Optical Fiber Module, External Modulation Transmitter, Huawei Olt Mutengo, Huawei Qsfp +, Sfp C ++,